Naagtii faallisada Ee rer Bulgeria Oo Sanadka 2021 Cudur Cusub Saadaalisay | Xaqiiqonews
Naagtii faallisada Ee rer Bulgeria Oo Sanadka 2021 Cudur Cusub Saadaalisay
Dad badan oo ku nool daafaha aduunka ayaa dhagta u taaga dhacdooyinka ay sii saadiliso haweeneyda indhoolaha ee rer Bulgeria Baba Vanga.
Naagtani ayaa horay ugu guuleysatay in ay sii saadaaliso dhacdadii 11 Sep ee qaraxyada daaraha mataanaha, sidoo kale waxa ay sadaalisay tusunaamidii ku dhufatay badweynta Hindiya sanadkii 2004, iyo xanuun aan la aqoonin oo ku dhacaya Donald Trump sanadka 2020.
Baba vanga ayaa sanadka 2021 sii saadaalisay waxyaabo badan oo la filan karo in ay dhacaan, dadka isticmaala baraha Bulshada ayaa sadaasha Baba Vanga ku sifeeyey “wax laga cabsado”.
Waxyaabaha Ay Sadaalisay Baba Vanga 2021
Waxa ay sheegtay sanadka la filaayo 2021, in uusan aheyn sanad kheyraadsan gaar ahaan waxa ay saadaalisay badweyn burburi doonto, waxaana taasi ka dhalan doono hirar waaweyn, fatahaadyo, dhul gariiro iyo duufaano.
Faalisadan waxa ay tiri: meeraha Jupiter waxa uu yeelan doonaa “cuf isjiid” fudud taasi oo ka dhalaneysa dhul-gariirada iyo burkaanooyinka dhulka ka dhici doono.
Waxa ay shaaca ka qaaday cudur cusub oo dunida ka dilaaci doono 2021, xilli uu kor u sii kici doono Covid-19.
Waxa ay tiri Shiinaha ayaa noqon doono awood weyn sanadka 2021
Waxa ay kale oo ay sadaalisay in la heli doono kowkab dhulka ka baxsan oo lagu noolaan karo, waxa kale oo ay sheegtay in la ogaan doono markii ugu horeysay sida ay ku timid nolasha dhulka.-200 sano ee soo socoto gudahood dadka waxa ay awood u yeelan doonaan in ay la xariiraan walaalahood ruuxaanta ah ee dunida kale ka imaanaya.